ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး သစ်သားအဆောက်အအုံ - Thutazone
သစ်သားနဲ့ ဆောက်တဲ့ အဆောက်အအုံတစ်လုံးဟာ ဘယ်လောက်အထိ မြင့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ….
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ သစ်သားအဆောက်အအုံကတော့ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာ ရှိနေပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၂၈၀ပေ မြင့်ကာ ၁၈ထပ် အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသစ်သား အဆောက်အဦးထဲမှာ လူနေအိမ်ခန်းများ ၊ ဟိုတယ်ရုံးခန်း ၊ စားသောက်ဆိုင်များ နဲ့ ရေကူးကန်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ Mjøsa ရေအိုင်ကို အစွဲပြုပြီး ဒီအဆောက်အဦးရဲ့နာမည်ကို Mjøstårnet လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
နော်ေ၀ နာမည်ကျော် ဗိသုကာဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Voll Arkitekter ရဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ cross-laminated timber နဲ့ glued laminated timber သစ်တွေကို အဓိကသုံးပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သစ်သားကိုအဓိကသုံးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် ပုံမှန်ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦးထက် ငလျှင်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသလို မီးလောင်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့ နည်းပညာများ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအဆောက်အဦးရဲ့ အလေးချိန်ဟာ ပုံမှန် ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦးရဲ့ အလေးချိန်ရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံသာရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း ၃၀% လောက်သက်သာစေပါတယ်။
အဆောက်အဦးရဲ့ အောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ ပေ ၁၆၀ခန့် နက်ပါတယ်။ သစ်သားအဆောက်အဦးလို့ ဆိုပေမယ့် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးက သစ်သားချည်းဖြစ်မနေပါဘူး။ အပေါ်ဆုံး အထပ် ၇ထပ်ရဲ့ကြားမှာ ကွန်ကရစ် slab တွေကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ဒီလိုထည့်သွင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အပေါ်အောက်ဖိအားနဲ့ အဆောက်အအုံကို လှုပ်ယမ်းစေခြင်းမှ ကာကွယ်စေနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ပိုမိုခိုင်ခံ့စေဖို့ သစ်သားအလယ်တိုင်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
Mjøstårnet i Brumunddal, Norway.
Posted by Woodify AS on Wednesday, February 27, 2019